I-Texas Hold'em elihle kakhulu Real Real Casinos Online - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Texas Hold’em
Uma udlala iTexas Holdem ngemali yangempela
Kuyini iTexas Hold’em?
Imithetho Eyisisekelo yeTexas Hold’em
Isu Eliyisisekelo LaseTexas Hold’em
Umlando weTexas Hold’em
Akunandaba ngamasu akho, ama-stratagems, noma ama-hoodwinks, kubalulekile ukuhlala unesibopho ngenkathi ugembula. Imithetho elandelayo yesithupha ifuna ukukhuthaza ukugembula okunengqondo: ukusungula isabelomali, ukubeka umgomo wokuwina ngemuva kokukhipha imali nokuthi cha otshwaleni. Lesi sakamuva mhlawumbe sibaluleke kakhulu.
Uma uzitika ngotshwala, izinzwa zakho ziyahlupheka. Ngalokho kushiwo, kungcono ukuhlala uzolile kuwo wonke umdlalo. Ngaphezu kwalokho, ukwenza isabelomali kuzokugcina uthembekile futhi kusize ukugwema ukusebenzisa ngokweqile. Okokugcina, ukuba nomgomo engqondweni kuqinisekisa ukuthi unokuthile ongakudlalela. Ngenxa yalokho, udlala ngokuzibophezela ekuphishekeleni umklomelo wakho.
Ngenxa yomdlalo wegeyimu wayo othokozisayo, iTexas Hold’em izitshele kahle kakhulu ohlelweni lwethelevishini, luyenza isabalale kabanzi. Umdlalo uye waba okuhlukile kakhulu kwe-poker eminyakeni yamuva futhi bonke abathanda i-poker bathanda ukuwudlala kuzinkundla ezahlukene ze-inthanethi.
I-Texas Hold’em poker ingadlalwa kunguqulo yakudala, ngesoftware ye-CGA, noma enguqulweni ye-LIVE. Izinhlelo eziyinkimbinkimbi zikuvumela ukuthi udlale ngama-croupiers wangempela, uphile kusuka ekhasino langempela nge-webcam. Ungabuka i-croupier isabalalisa amakhadi bese ulinda ukubheja komdlali, okwenza umdlalo ujabulise nakakhulu.
Amakhadi ama-2 abhekiswa phansi abheke kumdlali ngamunye, kuthi amakhadi ama-5 abekwe etafuleni. Kukhona izabelo ezi-3, kufaka phakathi i- “flop”, i-1 ngayinye ‘yomfula’ ne “turn”. Umgomo ukufeza ukuqoqwa kwamakhadi we-premium 5 ngamakhadi ama-2 okuqala namakhadi abiwe ayi-5.
Uma uzwa ukuthi isandla sakho sinamandla ungasonga, ushayele noma uphakamise, okwenzeka kuzo zonke izikhathi ezi-4 zomdlalo wokubheja. Umdlali ophethe isandla sekhadi le-premium uzuza ngemuva kokuqedwa kwemizuliswano Amandla wokusebenzisa ‘i-poker face’ yakho ayasebenziseka, njengoba iqinisekisa abanye ukuthi balahle isigxobo sabo ebhodweni.
Ama-encyclopedia onke abhaliwe eminyakeni edlule ukuthi angawunqoba kanjani lo mdlalo. Ukuze ube uchwepheshe wangempela, kufanele ufunde okuningi futhi ujwayele ukubala kokungavumelani, futhi ngaphezu kwakho konke, wazi ukubaluleka kwesikhundla okuhleli kuso etafuleni esandleni ngasinye.
Amanye amathiphu wabaqalayo, ngaphandle kokuthenga incwadi enhle, afaka:
Qala kumatafula anezigxobo eziphansi, ugweme lezo ezihanjwa oshaka.
Dala indawo enethezekile nengaphazamisi ekhaya.
Yiba nesineke kakhulu lapho ulinda amakhadi afanele ozodlala ngawo futhi ungazitholi usuthathekile, ikakhulukazi ngemuva kwesandla esilahlekile.
Ngenkathi umlando we-poker uhlehlela emuva eminyakeni engamakhulu ayisihlanu, iTexas Hold’em cishe “iyisanda kuzalwa” njengoba yavela ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili Ikhaya lale poker libhekwa njengeTexas, yize ukuthandwa kwalo kwanda ngemuva kokubonakala kwalo eLas Vegas eminyakeni engamashumi ayisithupha.
Ngo-1970, iTexas Hold’em yafakwa kuhlelo oludumile lwe-World Series of Poker. Ekuqaleni kweminyaka engamashumi ayisishiyagalombili, yanqoba amakhasino aseYurophu, futhi kusukela ngaleso sikhathi waba yinkosi ye-poker. Namuhla, ngenxa ye-intanethi, izigidi zabadlali abavela kuwo wonke amagumbi omhlaba bancintisana nsuku zonke.